Fibatana fonjamby – Mada 2019: voafidy ho atleta mendrika i Sabrina sy i Tina Michel | NewsMada
Tontosa soa aman-tsara tao amin’ny CRJS (Centre régional de la jeunesse et des sports) Toamasina ny fiadiana ny tompondaka an’i Madagasikara 2019, taranja fibatana fonjamby.
Nisongadina tamin’izany i Sabrina (49 kg) sy i Tina Michel (73kg), voafidy ho atleta mendrika. Mpibata fonjamby miisa 64 avy amin’ny ligim-paritra enina, nahitana ny ligin’Atsinanana, ny ligin’Analamanga, ny ligin’IiToliara, ny ligin’i Boeny, ny ligin’Itasy ary ny ligin’i Vakinankatra no tonga nandray anjara, tamin’ity fifaninanam-pirenena 2019 ity. Tsy nahatonga solontena kosa ny ligin’i Menabe sy ny ligin’Alaotra Mangoro. Nahafapo ny vokatra, raha ny nambaran’ny filohan’ny federasiona malagasy ny taranja fibatana fonjamby, Randriamanarivo Harinelina, na mbola tsy tomga amin’ny tena tanjona aza. Efa avo lenta, hoy izy, iny fifaninanana ity, satria marobe ireo taninketsa nisandratra. Tsy nandray anjara rahateo izy efatra mianadahy avy niatrika ny fiadiana ny tompondaka an’i Afrika farany teo ka vao mainka nahitana tsara ny haavo teknikan’ny atleta tsirairay. “Mino sy manantena aho fa isan’ny hitondra medaly maro ny mpibata fonjamby malagasy, any amin’ny “Lalaon’ny Nosy” raha izao vokatra izao. “Tena tanjona ny “Lalao olympika” fa dingana ihany ny “Lalaon’ny Nosy””, hoy ny nambaran’ny filohan’ny federasiona.
Vao mainka, hoy hatrany ity farany, hitombo ny lentan’ireo atleta aorian’ny fiofanana hatrehina any Sina, ny volana jona izao. Mahakasika izay indridra, atleta 13 mianadahy, miaraka amin’ny mpanazatra iray, ny hihazo an’i Sina, hiatrika ny fiofanana hanomanana ny “Lalaon’ny Nosy”, hatao any Maorisy ny volana jolay izao.
Raha hiverenana ny vokatra tamin’ity fifaninanam-pirenena ity, nisongadina ary voafidy ho atleta mendrika, teo amin’ny vehivavy, Andriamintatsoa Sabrina Ny Hasina, sokajy latsaky ny 49 kg, ligin’i Vakinankaratra. 147 ny “total olympique” voabatany, 66 kg ny “arraché” ary 81 kg ny “épaulé jeté”. Teo amin’ny lehilahy kosa, nosafidin’ny mpitsara ho atleta mendrika Randrianjatovo Fanambinana Tina Michel, sokajy latsaky ny 73 kg, avy amjn’ny ligin’i Boeny. Nahatratra hatramin’ny 125 kg ny voabatany, teo amin’ny “arraché”, 150 kg kosa ny “épaulé jeté” izay nanome 275 kg ny “total olympique”.
Ligy mendrika i Boeny
Ankoatra izay, navitrika indrindra tamin’ity fifaninanam-pirenena 2019, fibatana fonjamby, ity ny ligin’i Boeny. Ity farany izay voafidy ho ligy mendrika indrindra ka notoloran’ny federasiona amboara. Nahazo medaly miisa 24 ity ligy ity ka volamena ny 14 amin’izany.
Teo amin’ny laharana kosa, manaraka ny ligin’Analamanga izay nahazo medaly 19 ka volamena ny valo amin’ireo. Ny ligin’Atsinanana no nanakatona ny telo voalohany amin’ireo ligy mendrika, medaly 12 ka volamena ny telo ny norombahiny. Teny fisaorana nentin’ny filohan’ny federasiona, Randriamanarivo Harinelina, ny namaranana ny fifaninanana, nakasitrahany ireo niara-niisalahy tamin’ny fikarakarana sy ny fanatontosana rehetra, anisan’izay ny CRJS Toamasina sy ny ligin’Atsinanana, nampiantrano, ny minisiteran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena, ny mpikambana rehetra eo anivon’ny federasiona sy ny Komity olympika malagasy, ny mpanao gazety fanatanjahantena, ny teknisianina rehetra, ireo federasiona namana ary indrindra, ireo atleta tonga nandray anjara. Tsara ny manamarika fa handray ny fiadiana ny tompondaka an’i Madagasikara, taranja fibatana fonjamby, indray amin’ny taona 2020, ny ligin’i Vakinankaratra.
Ireo tompondaka rehetra:
Vehivavy: “poussine”: 22,35 kg: Rakotonoely Tendry, Analamanga (27 kg) “minime”:45 kg:
Rakotonoely Tendry, Analamanga (58 kg) cadettes:40 kg: i Tiavina Fabia, Vakinankaratra
(98 kg)-45 kg: Randriamialisoa Vanessa, Analamanga (64 kg)-49 kg: Razanavaosolo Charline
Julda, i Boeny (80 kg)-55kg: Rasoanandrasana Claudia, i Toliara (132kg) “juniors”: 45 kg:
Randriamialisoa Vanessa, Analamanga (64 kg)-49 kg: Andriamihaja Tahiry Olivia, i Boeny
(100 kg)-55 kg: Rasoanandrasana Claudia, i Toliara (132kg)-59kg: i Nomenjanahary Sylvanah, Atsinanana (73 kg)-71kg: Ralijaona Volombolamena, Atsinanana (113 kg). “seniors”:49 kg: i Ny Hasina Sabrina, i Vakinankaratra (147 kg)-55 kg: Rakotoarisoa Angelina Sarah, i Boeny (145 kg)-59 kg: Randrianandrasana Sitrakiniaina, Analamanga (160 kg)-64 kg: Rafanomezantsoa Harisoa, Atsinanana (88kg)-71kg: Andrianasolo Mendrika, i Boeny (160kg).
Lehilahy: “poussin”: 24 kg: Ralijaona Voharimboninahitra, Atsinanana (27 kg) “minime”: 49 kg: Randriamanana Fenosoa, Analamanga (58 kg)-67 kg: Randrianasolo Silvain, i Boeny (91 kg) “cadets”: 61 kg: Randrianatoandro Mickael, i Boeny (200 kg)-67 kg: Fenosoa Jocelyn,
Vakinankaratra (160 kg) “juniors”: 55 kg: Randriarimanana Jean Elariont, i Boeny (221 kg)-61 kg: Randrianatoandro Mickael, i Boeny (200 kg)-67 kg: Andrianantenaina Doralin, i Boeny (202 kg)-81 kg: i Dany Philbert Skezo, i Boeny (151kg) “seniors”: 55 kg: Randriarimanana Jean Elariont, i Boeny (221 kg)-61 kg: i Lahikina Jonnah Willy, i Boeny (155 kg)-67 kg: Andriamanalina Njaka Alain, Analamanga (212 kg)-73 kg: Randrianjatovo Fanambinana Tina Michel, i Boeny (275kg)-81 kg: Randrianavalona Claudio, Analamanga (285kg).